China Medium Excavator fekitari uye bhizimisi | Bonovo
Bonovo inopa dzakasiyana siyana dzekugochera muhukuru hwepakati kubva pamatani makumi maviri kusvika kumatani makumi matatu nemana. Iyi 20 matani anokambaira anodzika kubva kuBonovo chinangwa-chakavakirwa kuzadzikisa zvido zvemusika unonyanya kudiwa wepakati-basa musika. Kumusoro-kumagumo kumisikidza, yakakwira kuita turbocharged injini ine mechanical pombi inoratidzira simba rakakwira, yakaderera mafuta kudyiwa uye ine simba mafuta kuchinjika. Inotarisirwa padivi pane imwe yemakwikwi anonyanya kukwikwidza pamusika wekuchera, Bonovo's WE220H crawler excavator ndiye mudiwa akakwana kune akasiyana siyana epakati-basa kunyorera.
140 / 2050r / min
Max Kuchera Kudzika
5.4 / 3.1 km / h
Max Kuchera kukwirira
Max Kuchera Radhiyo
Chekutanga DOOSAN Brand
Yekutanga Shantui Brand
Bhaketi rekuchera simba
Kubudirira-KumusoroKuchengetedza Simba • Pro-Nharaunda
QSB7 Injini, China Stage III & Euro III Emissions Inoenderana.Inowedzera Simba, Inogadzikana, Yakaderera Mafuta Mafuta, Yakakwirira Yakavimbika uye Inoshanda.
Kubvisa Kwakakura & Kwakanyanya-Kubudirira Hydraulic System
Yakakura yekumhanyisa uye yepamusoro-inoshanda pombi, boom / tsvimbo kuyerera kumutsidzirwa, inokurumidza mota kufamba, nekukwirisa pombi uye injini inowirirana, max. kushandiswa kwesimba reinjini kunatsiridza zvakanyanya kuita kwekuita kwebasa.
Nzira yekudzivirira excavator yako kubva mukukuvara zvisina kukodzera?
Mucherechedzi wako ndeyekudyara kukuru. Saka chengetedza sezvazviri. Ita shuwa kuti yako yekuchera ine imwe mhando yekurwisa-kuba michina kana tekinoroji. Chinhu chekupedzisira chaunoda kungoerekana usina chidimbu chemidziyo yaunogara uchivimba nayo. Heano mamwe matipi ezve maitiro ekudzivirira kukanganisa.
Kugadzira, kuyedza maitiro & kunyorera
Zvikamu uye Zvakabatanidzwa Kuwanikwa
Dzimwe nguva mune yako muridzi, ungangoda kutenga zvimwe zvinotsiva zvikamu. Nekuda kweizvi, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana nyore kuwana kune izvo zvikamu zvinoumba muchina wako.
Paunenge uchinge wasarudza chidimbu chaunoda, tarisa-tarisa kuti uone kana zvimwe zvinotsiva zvingatengwa munzvimbo yako. Kunyangwe ivo vasingafanire kuwanikwa munharaunda, kuva navo padyo kuchakubatsira kugadzirisa matambudziko nekukurumidza. Zvikasadaro, iwe uchafanirwa kumirira zvikamu zvekutumira kwauri.
Ita shuwa kuti zvinonamirwa zviripo padhuze-neizvo. Nenzira iyoyo, paunenge uchizvida, zvichave nyore kuwana. Tarisa uone kana paine sarudzo dzekurenda, zvakare, kana iwe uchingoshandisa zvimwe zvakabatanidzwa pano neapo.
BONOVO Zvishongedzo fekitori inogona kukupa iwe hombe dzakasiyana dzekubatanidza kune chako chekuchera, iwe unongoda kutaura ese ese mamiriro ezvinhu anokwanisa kushanda aungatarisana nawo, kutengesa kwedu kuchakupa imwechete-mira yekutenga mhinduro ipapo.
BONOVO Fekitori yepasi pemotokari inogara yakamira kukupa zvinokodzera zvekutakura zvinhu zvemuchina wako wese kusanganisira zvekuchera, mabhurldoz, min diggers, skid steer loaders uye nezvimwe.
Pashure: Amphibious Excavator
Zvadaro: Mini Excavator 1 Ton - ME10
20 matani excavator
21 matani excavator
katsi svikiro excavator
wepakati excavator iri kutengeswa
wepakati saizi yekuchera
Mini Excavator 1.6Toni - ME16